थाहा खबर: भदौ १ मा 'मिस्टर भर्जिन'
भदौ १ मा 'मिस्टर भर्जिन'
काठमाडौं : फिल्म ‘मिस्टर भर्जिन’ले आफ्नो प्रदर्शन मिति तय गरेको छ। फिल्म अब आँउदो बर्षको भदौ १ गते रिलिज हुने भएको छ। 'वोर्ल्ड वाइड फिल्म्स डिस्ट्रिव्यूसन प्रा.लि.'को ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म ‘मिस्टर भर्जिन’लाई विशारद बस्नेतको निर्देशन गरेका छन्।
फिल्ममा महेश दवाडीको कथा, रामेश्वर कार्कीको छायाँकन, विक्रम स्वाँर र दीपक याम सिंहको कोरियोग्राफी, सुरज पण्डित, श्रीकृष्ण बम मल्ल, बुलेट फ्लो, आधा सुर, आरजे, मिस्टर प्रिन्सको संगीत र मिलन डी. काप्रीले सम्पादन रहेको छ। खिलेन्द्र तिमल्सिना, प्रजापति सिवाकोटी, मुकेश रेग्मी र बिशारद बस्नेतको लगानी रहेको फिल्मा सन्दिप उप्रेती सह निर्माताको रुपमा रहेका छन्।